Yohimbe hodi-kazo nalaina - J & S Botanics
[Latina Name] Corynante Yohimbe [Plant Source] Yohimbe hodi-kazo nangonina avy any Afrika [Specifications] Yohimbine 8% (HPLC) [endrika] Red Brown vovoka madinika [sombiny habeny] 80 harato [fatiantoka paharitry] 5.0% [Heavy Metal] 10PPM [ hanesorana ranoka mandevon-javatra] ethanol [Storage] Store amin'ny faritra maina sy mangatsiatsiaka, Mitandrema ny amin'ny hazavana sy ny hafanana mivantana. [Package] Nafatratra amin'ny taratasy-amponga sy roa harona plastika-anatiny. Net lanja: 25kgs / amponga [Inona no atao hoe yohimbe] Yohimbe dia Hazo izay maniry any Afrika, ary ny tompon-tany, tao no ...
[Latina Name] Corynante Yohimbe
[Plant Source] Yohimbe hodi-kazo nangonina avy any Afrika
[Bika Aman 'endrika] Red Brown vovoka madinika
[Fatiantoka paharitry] 5.0%
[Hanesorana ranoka mandevon-javatra] ethanol
[Package] Nafatratra amin'ny taratasy-amponga sy roa harona plastika-anatiny. Net lanja: 25kgs / drum
[Inona no atao hoe yohimbe]
Yohimbe dia Hazo izay maniry any Afrika, ary ny tompon-tany dia efa nampiasa ny hiteny ratsy hodi-kazo sy voadio kokoa iombonana amin'ny firaisana ara-nofo sy ny faniriana fampisehoana. Yohimbe efa nampiasaina nandritra ny taonjato maro toy ny aphrodisiac. Ary misy mihitsy aza toy ny hallucinogen nifoka. Amin'izao fotoana izao, Yohimbe nalaina hodi-kazo no ampiasaina mba hitsaboana ny ankamaroany levitra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Rehefa ingested, Yohimbe dia neken'ny ny ra renirano, ary manome hery Yohimbe ny vokatry avy amin'ny ny fahafahana hampitombo tsy mikoriana ny ra amin'ny pananahana - ary izany dia mihatra amin'ny lehilahy sy women.Aside avy amin'ny vokatry ny aphrodisiac, fikarohana vaovao Yohimbe koa fa manana mahery vaika antioxidant vokany.
Hodi-kazo Yohimbe hanesorana Soa £ º
1.It aphrodisiac ny iray ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
2.Be ampiasaina mba hiady levitra
3.It dia hita ho matanjaka antioxidant
4.It koa dia manampy manakana lalan-dra tsy hatao lalan-
5.It manampy fampisehoana ara-nofo, hampitombo libido
6.Ithas koa aseho mba hanampiana ny fisorohana ny aretim-po
Previous: Wolfberry hanesorana
Natural Sexual hatsarana
Reishi holatra hanesorana
Telefaonina: 0086 574 27855888
Telefaonina: 0086 574 26865651